Torolàlana farany ho an'ny Metrics an'ny Pinterest | Martech Zone
Torolàlana farany ho an'ny Metrics an'i Pinterest
Alakamisy, Aogositra 15, 2013 Asabotsy 4 Febroary 2017 Douglas Karr
Nahazo fivezivezena tsara be avy amin'ny Pinterest izahay. Tsy miova izany raha toa ka tsy miova ny fandefasana anay amin'ny Pinterest. Izy io koa dia nanampy rehefa nametraka ny Pinterest Pin Button ho an'ny sary - ho hitanao izany raha ampitainao eto ambany ny sary. Betsaka ny olona mizara ny sary momba antsika.
ny Birao Infografika Marketing saika manana mpanaraka 1,000 ary tena kely fotsiny no ataonay ivelan'ny fandefasana ny infografika ato! Ireo metrika izay ifantohantsika dia mifandraika mivantana amin'ny isan'ireo mpitsidika tonga amin'ny tranokalanay avy amin'ny Pinterest sy ny fahaizan'izy ireo mamadika na mandray anjara amin'ireo mpanohana anay.
Mahomby ny fampiasan'ny orinasa Pinterest - jereo fotsiny ny mpanjifanay, Lisitr'i Angie, ary ny zana-kazo. Izy ireo dia manao asa tsy mampino amin'ny fitazonana takelaka ampolony am-polony miaraka amin'ny atiny tsy mampino. Raha mampiasa Pinterest ianao amin'ny ezakanao amin'ny varotra an-tserasera, dia misy metatra vitsivitsy tsy maintsy tandremana. Mifamahofaho eo amin'ny fiaraha-monina atambatra miaraka amin'ny an lisitra feno an'ny metrika Pinterest azonao atao ny manara-maso sy manao ahoana ny ezaka ataon'ny ezaka ataonao.
Tags: kitikafanehoan-kevitrampanara-diafahatsapanafifandraisanatianyPinPinterestMarketing amin'ny Pinterestmetatra pinterestfanaraha-maso pinteresttongarepinshafainganam-pandeha
Mailaka, tadiavina maty na velona